Kitiho ny fotoana hafa amin'ireo singa manan-danja izay afaka ataovy ny antso hihetsika ka ny kisary izay hitondra ny mpampiasa amin'ny harona fiantsenana, ny bokotra, lasa fividianana. Ny bokotra CSS izay ho hitanao etsy ambany dia maimaim-poana ary misy bokotra 3D, ho an'ny tambajotra sosialy, hizarana, hiverenana any am-piandohana na hamoha ary koa ny hafa.
1 Bokotra 3D
2 Bokotra 3D raha hanery
3 Bokotra miverina
4 Bokotra bubble
5 Bokotra manampy
6 Bokotra CSS Offset
7 Fanidiana ny bokotra
8 Bokotra fanakatonana CSS
9 Bokotra fampidinana CSS
10 Bokotra fampidinana
11 Sarimihetsika fampidinana bokotra
12 Bokotra mihodina
13 Bokotra tabataba
14 Hover effet
15 Fihetseham-po hoverina
16 Vokatry ny gooey
17 Bokotra tsipika
18 Vokatry ny bokotra CSS telo
19 Toy ny bokotra Twitter
20 Toy ny bokotra fanentanana
21 Kitiho misaraka toy ny
22 Bokotra filalaovana
23 Bokotra CSS playback
24 Potsitra fiatoana / filalaovana
25 Bokotra tsotra Retro
26 Bokotra avana
27 Bokotra sosialy
28 Sarimiaina mitsingevana
29 Sary famantarana sosialy 3D
30 Bokotra sosialy
31 Bokotra sosialy goba
32 Bokotra fizarana
33 Bokotra fizarana media sosialy ao amin'ny SVG
34 Bokotra fizarana gooey
36 Bokotra famerenana kintana
37 Buttonan'ny Score SVG
38 Bokotra fiampangana
39 Ekena ny bokotra
40 Tsindrio swipe
41 Mamoha fihetsika
Bokotra 3D izay misongadina noho ny halalin'io na aiza na aiza alehantsika hametrahana azy amin'ireo effets shading izay mampiavaka ny tsirairay amin'ireo singa hita maso.
Bokotra 3D raha hanery
Este Bokotra 3D amin'ny CSS Izy io dia manana ny fahaizana hanomboka hihazakazaka ny sarimiaina rehefa manalava ny fametahana azy isika.
Ity bokotra CSS ity dia hitondra antsika eo an-tampon'ny tranokalanay rehefa nandalo azy io isika.
Una sary mihetsika mahafinaritra manome fiainana an'ity bokotra ity hanampiana CSS izay mety ho iray amin'ireo singa mampiavaka ny tranokalantsika.
Bokotra CSS Offset
Mitovy amin'ilay teo aloha, na izany aza miaraka amina sary mihetsika somary hafa kely. Mety tsara ho an'ny andian-tranonkala amin'ny lohahevitra manokana.
Fanidiana ny bokotra
Tsindrio izany bokotra amin'ny CSS sy HTML ho an'ny sary mihetsika famaranana hamokarana. Tsotra, fa misy vokany tsara amin'ny fahitana.
Bokotra fanakatonana CSS
Amin'izay fotoana izay andao avela ny pointer totozy Amin'ity bokotra akaiky ity dia afaka mahita ny sarimiaina mihetsika izay hampidirinay ao amin'ny tranonkala izahay.
Bokotra fampidinana CSS
Raha manana atiny alaina amin'ny tranokalanay izahay dia zava-dehibe izany manana bokotra mety izahay handehanan'ny mpampiasa tsara haingana eo am-pilanao. Misongadina ity bokotra ity rehefa tsindriana ary milatsaka fikorontanana kely amin'ny sary mihetsika efa vita tsara.
Ity bokotra ity dia miavaka amin'ny sary mihetsika ho an'ny manangana baolina kely izany dia hifindra amin'ny lafiny iray amin'ny bara mankany amin'ny iray hafa mba hampisongadinanay ny hetsika ataon'ny mpampiasa rehefa manindry ny fisintomana ianao.
Sarimihetsika fampidinana bokotra
Una sary mihetsika lava be ho an'ny bokotra iray, saingy mety ho io antsipiriany io izay manome ny maha matihanina ny tranonkalanao ho fisintomana ireo karazana rakitra rehetra.
Miandry anao ity bokotra ity avelao ny pointer totozy etsy ambony mba hahitanao ny sary mihetsika miavaka noforoniny.
Bokotra iray hafa izay miahaka sary mihetsika mamiratra izany dia mitranga rehefa mivezivezy eo ambonin'ilay mpanondro.
Ny effets hover mahaliana iray hafa ao amin'ny CSS izay miavaka amin'izany sary mihetsika haingana sy mailaka izay miteraka fahatsapana tsara.
Bokotra iray miaraka amina fomba mahafinaritra amin'ny sary mihetsika ho an'ny tranonkala misy fikitika mahazatra.
Vokatry ny gooey
Un vokany tsotra sy mahaliana izay mampitombo ny haben'ny bokotra CSS misy HTML kely.
Stripe dia fantatra amin'ny azy asa tsara amin'ny famolavolana UI an'ny tranokalanao, ity bokotra Stripe ity dia nahazo tsindrimandry mba hahafahanao mitondra izany ao amin'ny tranonkalanao.
Vokatry ny bokotra CSS telo
Vokatry ny CSS telo amin'ny sarimiaina ho an'ny bokotra ary afaka mandinika fomba tena tsara isika.
Toy ny bokotra Twitter
Bokotra ny tiany amin'ny Twitter miaraka amina sary mihetsika mamiratra sy mahery. Tonga lafatra ho an'ireo andro media sosialy ireo.
Toy ny bokotra fanentanana
eto dia ho ny fo ireo izay mitsambikina noho ny fifaliana rehefa tsindry ny bokotra mitovy amin'izany.
Kitiho misaraka toy ny
iray hafa sary mihetsika tena liana amin'ny vokany lehibe ho an'ny bokotra mitovy amin'ny tambajotra sosialy.
Kitiho ny lalao izay hanomboka mitsambikina, koa noho ny hafaliana, rehefa tsindriana.
Bokotra CSS playback
Ny sary mihetsika iray dia hamafa ilay boribory manodidina ny sary masina Famerenana ity bokotra CSS ity.
Potsitra fiatoana / filalaovana
Bokotra iray fotsiny miato / milalao miaraka amina fikitihana faran'izay kely Amin'ny famolavolana.
Bokotra tsotra Retro
Toy ny manery ny bokotra amin'ny mpanara-maso lalao avy amin'ny console toy ny XboX.
Bokotra iray misy a sarimiaina avana izay mamerina ny fampandrenesana tonga amin'ny Galaxy S8.
Vatasarihana izay misokatra miaraka amin'ny sary masina media sosialy malaza amin'ny alàlan'ny famelana azy rehetra hanondro ny totozy.
Bokotra iray misy a sary mihetsika tsara izany dia manomboka amin'ny fotoana tsindrio azy io.
Sary famantarana sosialy 3D
Un vokany manintona ary izany dia mitranga rehefa avelantsika ny toerany.
ireo bokotra sosialy mampiasa sary mihetsika Manova ny loko avy any ambony izy mba hanavahana ny tenany amin'ny ambiny.
Bokotra sosialy goba
Ireo bokotra ireo dia miorina anaty goba izay mihetsika tanteraka rehefa avelantsika eo amboniny ny tondro.
Un bokotra fizarana miavaka amin'ny sarimiaina tsingerina tsy manam-petra.
Bokotra fizarana media sosialy ao amin'ny SVG
Tsindrio fotsiny ny bokotra fizarana ary ho hitanao ny vokatr'Andriamanitra izay mitranga amin'ity bokotra media sosialy ity.
Bokotra fizarana gooey
Miaraka amin'ny hafa sary mihetsika «Gooey», ity bokotra ity dia manaitra ny vokany vokariny.
Este bokotra dia mizara efatra samy hafa hahafahanao misafidy ny tambajotra sosialy izay hamoahanao ny atiny nizara mivantana.
Bokotra famerenana kintana
Bokotra mametaka izay manangona ny isa fa homenao rehefa avelanao ilay tondro nanondro.
Buttonan'ny Score SVG
Bokotra iray hafa hover ho an'ny isa amin'ny naoty vokatra na inona.
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra mampakatra dia hanomboka ny fizotry ny fisintomana na izay mety indrindra amin'ny tranonkalanao.
Ekena ny bokotra
Tsindrio izany dia ekena ny taratasy iray na hetsika hafa mila fankatoavana avy amin'ny mpampiasa ny tranokalanay izany.
Natokana ho an'ny finday, ity bokotra ity dia tsy maintsy tsindriana mba horaisina amin'ny sisiny miaraka amin'io fihetsika io izay mahazatra amin'ny finday avo lenta.
Un fihetsika amin'ny lafiny misy rantsantanana na tondro ary hanokatra ny terminal ihany isika. Bokotra tsara hafa ho an'ny finday.
Ry namana mandray anjara betsaka, misaotra
benito carlos dia hoy izy:
somary mavesatra ny pejinao, raha fantatrao betsaka momba ny fandaharana sy ireo zavatra ireo dia tokony hanatsara izany ianao fa tsy hampiasa wordpress xc
Mamaly an'i benito carlos
Ny tranonkala tsara indrindra misintona sary loharano misokatra
Lalao dimy hianarana hampiasa fitaovana famolavolana sary